Wafdi ka socda Galmudug oo kormeeray dekadda magaalada Hobyo+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wafdi ka socda Galmudug oo kormeeray dekadda magaalada Hobyo+(SAWIRRO).
Wafdi ka socda Galmudug oo kormeeray dekadda magaalada Hobyo+(SAWIRRO).
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Galmudug oo ka hadashay dardar gelinta howlaha la tacaalidda COVID-19+(SAWIRRO).
Next articleSafiirka Talyaaniga u joogay DRC oo la dilay.